Qadar oo laga helay dad qaba Coronovirus iyo wararkii u dambeeyay ee cudurkan - Jowhar Somali news Leader
Home News Qadar oo laga helay dad qaba Coronovirus iyo wararkii u dambeeyay ee...
Qadar oo laga helay dad qaba Coronovirus iyo wararkii u dambeeyay ee cudurkan
Dowlada Qadar ayaa xaqiijisay in tirada dadka uu soo ritey cudurka Coronovirus gudaha dalkeeda ay gaartay saddex ruux. Wasaarada Caafimaadka dalka Qadar ayaa sheegtay in labo ka mid ah dadkan ay ka yimaadeen dalka Iran.
Xukuumada Qadar ayaa bilowday tallaabooyin ay ugaga hortagaysa fiditaanka cudurkan iyadoo la joojiyay tartanka caanka ee MotoGP ee mootoyinka lagu tartamo oo la qorsheeyay in 8da bisha March uu ka dhaco dalka Qadar.
Sidoo kale waxaa laga mamnuucay dalka Qadar diyaaradaha ka imanaya dalka Masar sababo la xiriira cudurka awgeed.
Iran ayaa sheegtay in 11 ruux oo horleh ay u dhinteen cudurka Coronovirus iyadoo guud ahaan tirada ay gaartay 54 ruux.
Wadamada Czech Republic, Scotland iyo Dominican Republic ayaa ku dhowaaqay in dadkii ugu horeeyay laga helay cudurkan.
Guud ahaan caalamka tirada cudurkan u geeriyootay ayaa gaartay 2,900 oo ruux halka dadka uu hayana ay gaarayaan 87,000, iyadoo markii ugu horeysay lagu arkay cudurkan bishii December ee 2019 dalka Shiinaha.
Wadanka Finland ayaa qofkii lixaad ee cudurkan qaba laga helay,waxaana la karantiilay dad gaaraya 130 ruux kuwaasoo la rumeysan yahay in ay xiriir la sameeyeen ilmo laga helay cudurka.Wadanka Faransiiska dadka uu soo ritey cudurkan ayaa waxa ay gaarayaan 130 ruux.